Ụlọ Elu Ọhụụ Dị Elu na-agba ọsọ China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ dị elu dị elu,Ọnụ ụzọ ígwè ígwè,Oghere Ụlọ Ọrụ Ọrụ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọdịdị Aluminom Elu Elu Ọnụ Ụzọ > Ụlọ Elu Ọhụụ Dị Elu na-agba ọsọ
N'elu ụzọ ụzọ, a na-ekpocha ya maka arụmọrụ dị mma maka ihe dịka 50,000 cycles.
nke a na-ejikarị eme ihe maka ebe a na-ebugharị na ebe niile a na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ. E jiri ya rụọ okporo ụzọ, a ga-etinye ọnụ ụzọ ndị a na-emeghe oghere na mpaghara ndị nwere ọnụ ụlọ. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya.
Na counterbalance gụnyere nke isi iyi ndokwasa na a nchara shaft na-akwa trasile helical ọnya nchara.
Maka mmepụta nke oge a na ebe azụmahịa, Gbasagburu FV dị mma maka ndị na-ere ahịa ụgbọala, ọchịchị, ebe ụgbọala na nchebe.
Ọnụ ụzọ dị elu dị elu Ọnụ ụzọ ígwè ígwè Oghere Ụlọ Ọrụ Ọrụ Mee ka ọnụ ụzọ dị elu dị elu Dị ka ọnụ ụzọ dị elu dị elu Ọnụ ụzọ dị elu gbagoro elu Ọnụ ụzọ dị elu dị oke ọnụ ala Ọnụ ụzọ nchebe dị elu